मेगास्टार राजेशपायल राईको यो वाणी सुनौँ !
एमपी सुब्बा, काठमाडौं । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका ‘मेगास्टार’ राजेशपायल राईले लुँडो खेलेर दिन बिताएको पनि सोमबार ४२औँ दिन भयो । लुँडो खेल्नु राजेशपायलको रहर होइन, बा,ध्यता हो । लकडाउनको समय कसरी सदुपयोग गर्ने त ? ‘लुँडो खेल्ने हो, बेला–बेला साथीभाईसँग […]